New FinePix XP70 si Fujifilm, kọmpat maka ụdị ọnọdụ ihu igwe ọ bụla | Akụkọ akụrụngwa
Akụkọ Foto | | Foto
Ọhụrụ FinePix XP70 de Fujifilm Ọ bụ kọmpat igwefoto nke ahụ na-enyere ndị na-ese foto aka ịme foto na vidiyo pụrụ iche ma kesaa ha n'otu ntabi anya na ọnọdụ ihu igwe niile. Igwefoto a nke 16,4 megapixels Ọ na-eguzogide mmiri, ujo, oyi na ájá, ma na-ejikọta njikọta ikuku maka ịkekọrịta dị mfe na smartphone ma ọ bụ mbadamba na ọtụtụ ọrụ maka ịse foto.
N'etiti atụmatụ ya, ekwesiri ịmara na o nwere ihuenyo 2.7-inch, 5x optical soom (5 -25 mm) na ihe oyiyi ihe oyiyi dijitalụ. Ọzọkwa, detuo vidiyo zuru ezu HD.
1 Njirimara nke Fujifilm FinePix XP70
1.1 Nnọọ eguzogide ọgwụ na anọ etoju
1.1.1 Ihe oyiyi na vidiyo nkekọrịta ngwa ngwa
1.2 Ihuenyo LCD nwere mkpuchi mkpuchi
1.3 Camerakpụrụ igwefoto ihe
1.4 Ihe ngosi 16,4 MP nwere arụmọrụ pụrụ iche
Njirimara nke Fujifilm FinePix XP70
Nnọọ eguzogide ọgwụ na anọ etoju
FinePix XP70 dị mma maka egwuregwu dị oke egwu na arụmọrụ dị ka snowboarding, skiing, igwe kwụ otu ebe na ihe omume ntụrụndụ ndị ọzọ, ebe ọ na-ezute ụkpụrụ IP68. Na omume, nke a pụtara na ọ bụ ihe na-enweghị mmiri ruo mita 10, na ọ nwere ike iguzogide otu nkedo karịa 1,5 m, na ọ na-eguzogide okpomọkụ nke -10 Celsius C ma na-eguzogide ntụ.
Usoro mkpọchi abụọ na batrị / kaadị ebe nchekwa na-enye nchebe agbakwunyere megide ihe na-egbochi oghere mberede, gbakwunyere njide n'ihu na isi mkpịsị aka dị maka njikwa dị mfe.
Ihe oyiyi na vidiyo nkekọrịta ngwa ngwa
FinePix XP70 kwadebere ya na arụmọrụ ikuku maka ịkesa onyonyo dị mfe site na ama ma ọ bụ mbadamba. Ejiri arụ ọrụ na smartphone na-enye ndị ọrụ ohere ịhọrọ ihe oyiyi ma ọ bụ vidiyo ma nyefee ha na-enweghị ịmepụta ID ma ọ bụ paswọọdụ. Naanị budata Fujifilm Igwefoto Ngwaọrụ ma wụnye ya na ngwaọrụ nnata.
Na mgbakwunye na nkenke dị mfe, Wi-Fi arụmọrụ XP70 na-enye ndị ọrụ ohere ịkwado ihe onyonyo na kọmputa. Ọ bụkwa usoro dị ngwa ma dịkwa mfe; jikọọ na Wi-Fi rawụta, họrọ "Chekwa na kọmputa" ma hapụ XP70 ka o mee ihe ndị ọzọ
Ihuenyo LCD nwere mkpuchi mkpuchi
N’ịtụle na a ga-eji FinePix XP70 mee ihe n’anyanwụ siri ike yana yana ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma, igwefoto na-egosipụta mkpuchi mkpuchi na-enwu enyo n’azụ ihuenyo LCD iji mee ka ọ dị mfe ilele ma ọ bụ ide ihe oyiyi n’elu osimiri ma ọ bụ na snow. . Ihuenyo LCD nwekwara ọrụ ihie na-akpaghị aka nke na-agbanwe dịka ọkwa ọkụ dị.
Camerakpụrụ igwefoto ihe
XP70 na-enye ọrụ dị iche iche vidiyo dị iche iche, gụnyere ọnọdụ igwefoto emereme ọhụrụ. Ejiri ya na nhọrọ nyocha igwefoto nhọrọ, nke na-eme ka oghere XP70 bụrụ oghere 18mm kacha mma. Ọnọdụ a na-enye ohere ịgbapụ aka na-enweghị aka ka ị wee bulie igwefoto na ahụ gị ma ọ bụ na ngwa egwuregwu wee banye n'etiti ọrụ ahụ. N'ihe igwefoto na-eme, ihuenyo LCD azụ na-agbanyụ na akpaghị aka iji mee ka oge ndekọ.
Maka ndekọ vidio ndị ọzọ, XP70 na-enye Full HD (1929 x 1080) vidiyo vidiyo na njirimara njirimara ngosi iji họrọ ntọala kachasị mma na nzacha dị elu iji mepụta mmetụta na-adọrọ anya. Igwe mkpọtụ ikuku, nke na - abụkarị nsogbu na ndekọ vidio dị na mpụga, belatara ekele maka nhazi windo ikuku, enwere ike ijide ọsọ ọsọ na opekata mpe 380 n'otu nkeji.
Ndekọ vidiyo dị mfe site na bọtịnụ vidiyo raara onwe ya nye, na enwerekwa ụfọdụ ọrụ ndozi igwefoto, dị ka vidio vidio iji wepụ ngalaba ndị a na-achọghị na ntaneti vidiyo, nke jikọtara vidiyo dị iche n'otu faịlụ.
Foto ndị dị elu na-enweghị mmetụta nke igwefoto igwefoto
XP70 na-enye elekere mgbanaka anya nke 5x nke gụnyere 28mm obosara obosara maka ịse foto nke mbara ala. Enwere ike okpukpu abụọ a na-ahụ anya dị elu ruo 10x na teknụzụ mbugharị dijitalụ Fujifilm nwere ọgụgụ isi, ebe ọrụ ntinye anya igwefoto na-eme ka o doo anya na mmetụta nke igwefoto na-ebelata.
Ihe ngosi 16,4 MP nwere arụmọrụ pụrụ iche
XP70 webatara ihe mmetụta 1 / 2,3-anụ ọhịa 16,4-megapixel CMOS maka nsonaazụ ya n'ọtụtụ ọnọdụ. Nchikota ihe mmetụta na ihe nhazi dị ike na-enye igwefoto ohere ịrụ ọrụ ngwa ngwa, na-ewepụta ihe oyiyi na 10 okpokolo agba kwa nke abụọ na mkpebi kachasị elu na ruo ihe ngosi 60 dị egwu kwa nke abụọ na mkpebi belata (2 MP). Ndị ọrụ chọrọ iji ngwa ngwa ndị a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ nwere ike ịme ngwa ngwa site na bọtịnụ mkpuchi na-aga n'ihu na igwefoto.
El mode ude mode awade ukwuu egosipụta mgbe na-ewere foto site na-ekpebi ihe nkiri na-weghara na-ebuli na-elekwasị anya, ikpughe, na shutter ọsọ maka kasị mma omume. Igwe foto dị n'okpuru na ọrụ nnukwu mmiri na-egosipụtakwa nzere XP70 maka ụdị ọnọdụ niile.
Ihe nzacha 10 dị elu na-enye nnukwu okike, ebe a na-eji nhazi ọtụtụ rụọ ọrụ weghara foto abụọ ma ọ bụ karịa maka onyogho dị elu (HDR) nke na-echekwa nkọwapụta na ndò na mpaghara na-enwu gbaa. N'ikpeazụ, Motion Panorama 360 Celsius ọrụ awade ikike weghara ikpọ panoramic foto na aka nke a button.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Foto » New Fujifilm FinePix XP70, kọmpat maka iji ụdị ọnọdụ ihu igwe niile
HeadProtect: lelee maka malware na Windows